Cordilleras: maxay yihiin, sifooyinka, samayska, cimilada iyo tusaalooyinka | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 28/09/2021 12:17 | Geology
ka safafka buuraha Waa dhul ballaaran oo buuro isku xiran, kuwaas oo guud ahaan u adeega xuduudaha juqraafiyeed ee u dhexeeya waddamada. Waxay asal ahaan ka soo jeedaan meelaha ay ciiddu is -beddesho dhaqdhaqaaqyada taarikada tectonic -ka, taasoo keenta in dheecaanku isku uruuro, kor u kaco dhulka dushiisa oo ka soo bilowda kala duwanaansho buur. Buuraha badiyaa waxay leeyihiin meelaha ugu sarreeya. Sare u qaadista qashin -qubka waxay qaadan kartaa qaabab iyo cabbirro kala duwan, sida buuraha, safafka, buuraha, buuraha, ama tiirrada.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato safafka buuraha, qaab -dhismeedkooda, cimilada iyo noocyada.
1 Sameynta kala duwanaanshaha buurta
3.1 Buuraha Andes
4 Safafka kale ee buurta
Sameynta kala duwanaanshaha buurta
Buuraha waxaa samaysma dhaqdhaqaaqyada taarikada tectonic -ka ee dhulka, kuwaas oo isku dhaca, isku laabma, oo qalooca ilaa ay ka sara maraan qolofka dhulka. Sediments -ku ku yaal dusha waxaa saameeya ifafaale dibadeed, sida heerkulka sare, nabaadguurka ciidda dabaysha, nabaad guurka biyo, iwm
Buuraha ayaa sidoo kale laga abuuri karaa meelaha sare ee biyaha hoostooda. Tani waa kiiska jasiiradda Hawaii iyo jasiiradaha ku xeeran, kuwaas oo samaynaya nidaam buuraley ah oo ku yaal badda gunteeda, oo meelaha ugu sarreeya ay ka muuqdaan heerka badda si ay u sameeyaan koox jasiirado ah.
Buurta ugu dheer adduunka ee la ogaaday waxay ahayd Mauna Kea oo ku taal Hawaii. Ka kooban volcano hurday oo ku degtay Badweynta Baasifigga. Waxaa jira 10.203 mitir xagga hoose ilaa sare, laakiin joogga sare waa 4.205 mitir. Buurta ugu sarraysa marka loo eego heerka badda waa Mount Everest, oo 8850 mitir ka sarraysa heerka badda.
Heerka sare ee cadaadiska hawada, waxaa yaraanaya oksijiinta.
Cimilada buurta (oo sidoo kale loo yaqaan cimilada alpine) waxay ku kala duwan tahay meesha, muuqaalka dhulka, iyo dhererka buuraha. Cimilada ku xeerani waxay saameysaa heerkulka buurta min cagaha buurta ilaa dhererka celceliska, marka sare ee dhaadheer ee buurta dusheeda, ayaa ka weyn marka la barbardhigo cimilada gobolka.
Laga soo bilaabo 1.200 mitir oo ka sarraysa heerka badda, heerkulku wuxuu noqdaa mid qabow oo qoyaan badan, roobabkuna waa badan yihiin. Cadaadiska atmosfeerka ayaa hoos u dhacaya sababtuna waa sare u kaca sii kordhaya, taas oo macnaheedu yahay in cadaadiska hawadu uu hoos u sii dhacayo, wayna adag tahay in nooluhu neefsadaan markay kor u kacaan.
Sierra waa qayb ka mid ah buur yar oo ku taal buuro waaweyn. Buuraha lagu gartaa heerar aan joogto ahayn ama aad u kala duwan, laakiin dherer dhexdhexaad ah.
Tusaale ahaan waa Sierra Negra, Meksiko, oo ku taal gobollada Veracruz iyo Puebla (qayb ka mid ah Buuraha Fulkaanaha Cusub). Wuxuu ka kooban yahay fulkaane dabar go’ay waana buurta shanaad ee ugu sarreysa dalka oo dhererkeedu yahay 4.640 mitir. Waa meel dalxiis weyn u leh baaskiilka buuraha iyo socodka.
Andes waa buurta labaad ee ugu sarreysa Himalayas ka dib. Waa nidaam buuraley ah oo ku yaal Koonfurta Ameerika. Waa buurta ugu dheer adduunka, oo dhererkeedu yahay 8.500 kiilomitir iyo celcelis ahaan dhererkeedu yahay 4.000 mitir, waa buurta labaad ee ugu sarreysa buuraha Himalayas ka dib. Heerka ugu sarreeya waa Aconcagua, kaas oo 6,960 mitir ka sarreeya heerka badda. Waxay ku taallaa aag leh dhulgariir aad u xoog badan iyo fulkaano.
Andes waxaa la sameeyay xilligii Mesozoic. Waxay ka soo baxdaa gobolka hadda ee Venezuela ee Táchira ilaa Tierra del Fuego ee Argentina (iyada oo loo sii marayo Kolombiya, Ecuador, Peru, Bolivia iyo Chile). Socdaalkiisii ​​wuxuu sii watay koonfur, isagoo samaystay buur hoosteeda oo la yiraahdo "Arco de las Antillas del Sur" ama "Arco de Scotia", qaar ka mid ah meelaha ugu sarreeya waxay ka soo muuqdeen badda si ay u sameeyaan jasiirado yaryar.
Celceliska dhererka Himalayas waa 6.100 m. Waxay ku taallaa Aasiya waana taxanaha buurta ugu sarreeya adduunka. Buuraha badan ee ka kooban, Buurta Everest ayaa taagan, oo ah meesha ugu sarraysa adduunka oo dhererkeedu yahay 8.850 mitir oo ka sarraysa heerka badda, iyo caqabadaha baaxadda leh ee ku jira awgood, waxay astaan ​​u noqotay fuulayaasha adduunka oo dhan.
Himalayas waxaa la sameeyay qiyaastii 55 milyan oo sano ka hor. Waxay dhererkeedu dhan yahay 2.300 kiiloomitir waqooyiga Pakistan ilaa Arunachal Pradesh (India), oo ku dul wareegeysa Tibet safarka oo dhan. Dhererkeeda celcelis ahaan waa 6.100 mitir.
Saddexda nidaam ee biyaha ee Aasiya waxay ku dhasheen Himalayas: Indus, Ganges iyo Yangtze. Wabiyadan ayaa sidoo kale gacan ka geysta habaynta cimilada dhulka, gaar ahaan qaybta dhexe ee qaaradda Hindiya. Himalayas waxay hoy u yihiin dhowr baraf -baraf sida Siachen (kan ugu weyn adduunka oo ka baxsan gobollada dabaysha), Gangotri iyo Yamunotri.
Safafka kale ee buurta
Waxaan ku tilmaami doonnaa qaar ka mid ah buurta ugu muhiimsan adduunka:
Neovolánica Range Mountain (Meksiko). Waa nidaam buuraley ah oo ay sameeyeen foolkaano firfircoon oo aan firfircoonayn, laga soo bilaabo Cabo Corrientes oo ku taal xeebta galbeed ilaa Xalapa iyo Veracruz oo ku taal xeebta bari, iyagoo ka tallaabaya badhtamaha Mexico. Meelaha ugu sarreeya sida Orizaba (5.610 mitir), Popocatépetl (5.465 mitir), Istachivat (5.230 mitir) iyo Colima (4.100 mitir) ayaa taagan. Dooxooyinkeeda iyo baasiinyadeeda badankood waxaa loo adeegsadaa beeraha, carrada hodanka ku ah waxaa ku jira lacag, rasaas, zinc, naxaas, iyo daasad.
Alps (Yurub). Waa nidaamka buurta ugu ballaadhan Bartamaha Yurub, oo samaysanaya buur dheer oo dhererkeedu dhan yahay 1.200 km oo ka bilaabmaysa bariga Faransiiska ilaa Switzerland, Talyaaniga, Jarmalka iyo Austria. Dhowr ka mid ah meelaha ugu sarreeya ayaa dhererkoodu ka badan yahay 3.500 oo mitir waxaana ku jira in ka badan 1.000 baraf. Taariikhda oo dhan, keniisado badan oo Masiixiyiin ah ayaa degey buuraha Alps iyagoo raadinaya xasillooni.
Buuraha Rocky (Waqooyiga Ameerika). Waa xuduud buuraley ah oo ka bilaabmaysa Qaanadda Ingiriiska ee waqooyiga Alberta iyo Kanada ilaa koonfurta New Mexico. Dhererka guud waa 4.800 kilomitir halka ugu sarraysa uu dhererkiisu yahay ilaa 4.000 oo mitir. Waxaa ku jira baraf -barafyo muhiim ah sida Dinwoody iyo Gooseneck, kuwaas oo si xawli ah u sii yaraanaya cimilada sii kululaanaysa.
Pyrenees (Spain iyo Faransiiska). Waa nidaam buuraley ah oo ku fidsan bari ilaa galbeed inta u dhaxaysa Spain iyo France (laga bilaabo Cape Cruz oo ku taal Badda Mediterranean -ka ilaa Buuraha Cantabrian) wuxuuna fidiyaa in ka badan 430 kiiloomitir. Meelaha ugu sarreeya ayaa ku yaal bartamaha buuraha waxayna ka sarreeyaan 3.000 mitir, sida Aneto (3.404 mitir), Posets (3.375 mitir), Monte Perdido (3.355 mitir) iyo Pico Maldito (3.350 mitir). Hadda, waxay leedahay xoogaa baraf -barafyo yaryar oo ku yaal meel ka sarreysa 2700 mitir oo ka sarraysa heerka badda.
Waxaan rajaynayaa in xogtan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan baaxadda buuraha ee ugu weyn adduunka iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Heerarka buurta
Waa maxay dayax madoobaad